Sarin'ny Tibetan Connections Tour Company
Asia Shina Tibet
Tibetana Fifandraisana - Profile & Description of Tour Company
Ny Tibetan Connections dia fitahirizan'ny orinasa fitsangatsanganana ho an'ireo fanahy avonavona mijery ny traikefa Tibetana. Na dia mieritreritra an'i Tibet ho any amin'ny faritra misy an'i Lhasa ho renivohitra (na TAR na Tibetana Autonomous Region ihany) isika dia miorina any an- tanandehibe , dia misy ny vondrom-piarahamonina Tibetana lehibe ao amin'ny faritr'i Amdo (faritra ao Gansu, Qinghai sy Sichuan Provinces), ny Faritr'i Kham (faritra ao amin'ny faritanin'i Sichuan) ary ny Faritr'i Dechen (ampahany amin'ny faritanin'i Yunnan).
Ny governemanta Shinoa dia nametraka ny fahasarotana (ary sarotra ny mahatakatra) ny fitsangatsanganana mankany amin'ny TAR, ka raha ny fiainany sy ny kolontsainy Tibetana izay tianao, ary koa ny toerana mahafinaritra, dia ny safidy tsara ho any amin'ireny faritra ireny. Mivezivezy any amin'ireny faritra lavitra be ireny-ny làlan-dàlana ary mampihetsi-fanahy sy manintona.
Ny Tibetan Connections dia fepetra izay mihazakazaka ao Xining, renivohitry ny faritanin'i Qinghai. Ny fitantanana sy ny mpiasa dia Tibetana foko ary izy ireo dia manokana ny tarika madinika sy ny olona avy any ivelany ivelan'i Shina. Izahay dia teo amin'ny dian'izy mianakavy niaraka tamin'ny ankizy kely ary tsy dia sarotra loatra ny nandraisana anay. Na izany aza, miresaka manokana amin'ny fitsangantsanganana misimisy kokoa izy ireo, toy ny fitsangatsanganana, kamboty miaraka amin'ny Nomads sy ny fitetezana sary.
Famerenana ny fitsangatsanganana - Ahoana no anaovana azy?
Raha mieritreritra ny hitsidika ireo faritra ireo ianao, dia afaka manaraka ny làlan'ny bus sy miankina amin'ny fitateram-bahoaka (ary voafetra).
Hahita teny anglisy vitsivitsy ianao amin'ny ankamaroan'ireo toerana ireo ary angamba mandalo kokoa Mandarin. Raha eo an-tsainao dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fiara mpitondra fiara sy mpitari-dalana iray. Amin'izany fomba izany, dia hifehy ny dianao ianao ary hanana mpitarika afaka mifampiresaka aminao ary mamaly ireo fanontaniana izay tsy isalasalanao.
Raha fantatrao izay tianao haleha dia mifandray mivantana amin'ny Tibetan Connections mivantana. Raha tsy azonao antoka, dia jereo ny drafitra samihafa ary jereo izay heverinao fa tsara.
Mifandray amin'ny fifandraisana Tibetana
Misy karazana fifandraisana isan-karazany:
Form amin'ny contact online
Tel +86 (0) 189 9720 0974
Tibetana Connections Guides
Ny mpitarika Tibetan Connections dia ny Tibetana eo an-toerana rehetra. Miteny Tibetana , Sinoa mandarina ary fiteny vahiny hafa izy ireo. Ny mpitarika dia afaka mitarika vondrona amin'ny fiteny anglisy, frantsay ary italiana.
Torolalana toro-làlana - Ny fanandramako amin'ny fifandraisana Tibetana
Rehefa nanapa-kevitra ny handeha ho any Amdo (faritanin'i Qinghai) aho dia nifandray tamin'ireo mpanjifany mpizaha tany maromaro mba hijery ny karazana fiasa 4 andro izay natolotr'izy ireo ahy. Te-hiorina ny fijanonanay any Xining, renivohitry ny faritanin'i Qinghai izahay ary avy eo dia maka andro fitsangatsanganana isan'andro mba hahita zavatra samihafa. Nanapa-kevitra ny hanao fanapahan-kevitra roa aho - ny fiantohana ny torolàlana Tibetana sy ny vidiny mendrika. Tena manelingelina ireo masoivoho mpizaha tany maro izay mitaky ny vidiny avo be noho ny maha vahiny anao.
Mba hanome ohatra iray - dia nandefa fanandramana mitovy amin'ny fifandraisana Tibetana aho ary koa orinasa iray mpitsidika any Lhasa antsoina hoe Travel West China.
Ny Travel West China dia nanonona ahy in-telo avo telo heny ny saram-pandehanana ho an'ny dia lavitra toy izany. Tsy azoko alaina sary an-tsaina hoe inona ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny serivisy dia mety ho anisan'ireo mpitarika azy. Mety ho tsara kokoa ny fiara fa mandeha eny amin'ny làlana iray ihany, ary mahita ireo fomba fijery ireo. Tsy azoko an-tsaina fa ny fiara tsara kokoa sy ny mpitari-dalana tsara kokoa dia mendrika avo lenta avo lenta.
Hitako ny tehina izay nampitaiko momba ilay lalana izay fantatro sy valiny. Nanome toky izy fa hiantsoroka Tibetana eo an-toerana izahay ary faly izy fa afaka mividy ny làlan-kaleha misy anay. Ny flexibilité dia zavatra iray izay manantitrantitra foana ahy toy ny rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao, tsy fantatrao hoe rahoviana ny andro tsirairay. Tena zava-dehibe izany. Raha ny zava-nitranga dia samy nijaly tamin'ny aretina izahay tamin'ny andro voalohany tany Xining (2.300m) ka nanapa-kevitra ny hanova ny lalana mankany amin'ny Farihin'i Qinghai amin'ny 2 andro fa tsy ny andro 1 mba hanomezany fahafahana hivoatra.
Faly be ry zareo fa tafahitsoka.
Ny mpitarika anay dia tena sariaka sy mahasoa. Tena tiany ny ankizy tamin'ny faran'ny fitsidihanay. Na dia fantatry ny kolontsaina sy tena vonona ny hamaly fanontaniana aza, dia tsy ampy ny traikefany. Afaka mamaly ireo fanontaniana sasantsasany izy kanefa tsy nanana ny harena sy ny halalin'ny fahalalana izay nantenaiko. Ny sasany amin'izany dia azo lazaina fa mety amin'ny baikon'ny teny Anglisy.
Tsipika ambany: Na dia tsy afa-po tanteraka amin'ny fahaizan'ny mpitarika aza aho dia mety hampiasa ny fifandraisana Tibetana indray. Ny fitsidihana ireo faritra ireo dia sarotra ny manao irery ary mieritreritra aho fa manana loharanom-bola lehibe izy ireo hanampy amin'ny fitsangatsanganana am-pilaminana.
Ahoana no hahatongavana any Lhasa, Tibet
Torolalana ho an'ny mpitsidika izay hitanao sy ataonao any amin'ny faritanin'i Gansu
Ny niandohana sy ny fanokafana ny lalana Silk tany Sina fahiny
Tobin'i Everest Base (Tibet Side)
10 Zavatra atao any McLeod Ganj
8 amin'ny The Best Street Markets any Londres
Ny Fifandraisana eo amin'ny Tea Tea sy ny Cocaine
Aiza no hankalazana ny taom-baovao any Puerto Rico
Mandeha ny Cinque Terre Trail System
Famerenana: Omnia Amelia Plantation Resort
Fihaonana tao Metro Detroit sy zavatra natao tamin'ny volana Janoary
Ny toerana mampiavaka indrindra an'i Afrika Atsimo
Amerikanina Amerikana Los Angeles
Ny seranam-piaramanidina manara-maso ny masoivoho Kowloon sy Hong Kong
Mpitsidika manohana an'i San Juan, Puerto Rico
Nahazo pasipaoro tany Oklahoma City
Key West Gay Resorts sy Torolàlana amin'ny Hotely
Top Restaurants in Detroit for Easter Brunch